Aeroflot dia manohy ny sidina mahazatra mankany Kyrgyzstan, Belarus, Kazakhstan ary Korea Atsimo
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Aeroflot dia manohy ny sidina mahazatra mankany Kyrgyzstan, Belarus, Kazakhstan ary Korea Atsimo
Septambra 22, 2020
Rosiana mpitatitra saina, Aeroflot, dia manambara fa ny serivisy iraisam-pirenena eo amin'i Moskoa sy Kyrgyzstan (Bishkek), Belarus (Minsk) ary Kazakhstan (Nur-Sultan) dia hanomboka amin'ny herinandro manaraka. Ny serivisy tsy tapaka eo amin'i Moskoa sy Korea atsimo (Seoul) dia hanomboka amin'ny 1 Oktobra.
Manomboka amin'ny 23 septambra ny sidina mankany an-drenivohitra Kyrgyz. Ny sidina SU1882 Moscow-Bishkek dia hiasa indray mandeha isan-kerinandro, amin'ny Alarobia, ary ny sidina fiverenana SU1883 Bishkek-Moscow dia hiasa amin'ny zoma.
Ny sidina Belarus SU1842 Moscow-Minsk sy SU1843 Minsk-Moscow dia hiasa indray mandeha isan-kerinandro, amin'ny asabotsy, manomboka ny 26 septambra.
Ny sidina mankany an-drenivohitra Kazakh dia hiverina amin'ny 27 septambra. Ny sidina SU1956 Moscow-Nur-Sultan sy SU1957 Nur-Sultan-Moscow dia hiasa indray mandeha isan-kerinandro, ny alahady.
Aeroflot dia hisidina any an-drenivohitra Korea Atsimo indray mandeha isan-kerinandro amin'ny Alakamisy (SU0250 Mosko-Seoul). Ny sidina miverina, SU0251 Seoul-Moscow, dia hiasa amin'ny asabotsy.
Rehefa mihatsara ny fifamoivoizana an'habakabaka iraisampirenena dia azo ahitsy ny zotram-piaramanidina amin'ireo zotra ireo.
Fitantanana hotely, COVID-19, governemanta / politika ary ianao
Misokatra indray ny trano fandraisam-bahiny, trano fisakafoanana, fisakafoanana ary fizahan-tany trekking ao Pokhara
Fiaraha-miasa, fifandraisana ary fiarahamonina natolotra tamin'ny BuzzHub IMEX vaovao